ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်မှု အလားအလာကို မှန်းဆကြည့်ခြင်း – Federal Journal
ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်မှု အလားအလာကို မှန်းဆကြည့်ခြင်း
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ အခြေခံ အကျဆုံးအချက်က ငြိမ်းချမ်းရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှသာ တိုင်းရင်းသားတွေ ရသင့်ရ ထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရရှိမှာဖြစ်သလို ပညာ ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း တွေပါ မြင့်မားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရပ်သား အစိုးရလက်ထက်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုး စားနေပေမယ့် ထင်သလောက် ခရီးမပေါက်ခဲ့ပါဘူး။
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေး နွေးပွဲတွေ ကျင်းပရာမှာ လည်း အားလုံးပါဝင် နိုင်တဲ့ ဆွေးနွေး ပွဲဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ NCA စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားတဲ့အဖွဲ့တွေ နဲ့ သာမက လက် မှတ် မရေးထိုးရ သေးတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့ ပါ ဆွေးနွေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ မြေပြင် အနေအထားမှာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ တချို့အဖွဲ့တွေနဲ့ တပ်မ တော်ကြား စစ်ရေးတင်း မာမှုတွေပါရှိနေလို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာ တာက တင်းမာမှုတွေကို ပြေလျော့စေမှာပါ။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နေရပ်စွန့် ခွာထွက်ပြေးရသူ တစ်သိန်း ခြောက်သောင်းကျော် ထိ ရှိနေပါပြီ။ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ် မှာလည်း တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နေရပ် စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ နှစ်သောင်း ကျော်ထိရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် တို့ မှာလည်း IDP စခန်း တွေမှာ နေထိုင်နေရသူ တစ် သိန်းကျော်ထိရှိနေပြီး မြေမြုပ်မိုင်း တွေကို လည်း ရှင်းလင်းနိုင် သေးခြင်း မရှိသေး ပါဘူး။ အရေးကြီး တာက ငြိမ်းချမ်း ရေး ဖော်ဆောင်ဖို့ အတွက် “နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို နိုင်ငံရေး နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ပါပဲ”။
အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်မှာ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး “၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ”ကျင်းပခဲ့လို့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘက်က မျှော်လင့်ချက်ကြီးခဲ့တာအမှန်ပါ။ သူမ ကိုယ်တိုင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးမရခြင်းရဲ့ ဒုက္ခကို အချိန်နဲ့အမျှ ပြည်သူတွေက ခံစားနေရတယ်လို့ အသိအမှတ်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပင်လုံညီလာခံ အတွက် အရေးပါတဲ့ အမျိုး သားအဆင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေကို တချို့ပြည် နယ်တွေမှာ ကျင်းပ နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
အစောပိုင်းက အစိုးရဘက်က ၆ လ တစ်ကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပသွားဖို့ စီစဉ်ထားပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ ခွဲမထွက် ရေးစတဲ့ကိစ္စတွေမှာ သဘောတူညီမှု မရခဲ့ဘဲ ကြန့်ကြာခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။ (၂၁)ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ပထမအစည်းအဝေးကို (၂၀၁၆) ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ နှစ်ကြိမ်ထပ်မံကျင်းပနိုင် ခဲ့ပြီး စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကိုတော့လာမယ့် ဩဂုတ်လ ဒုတိယ အပတ်မှာ ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။
NCA စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့ တွေသာမက လက်မှတ်မရေးထိုးရသေး သူတွေကိုပါ ဖိတ်ခေါ်သင့်တယ်လို့ ယူဆ သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ အရေးကြီး တာက အစိုးရ၊ တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြား ‘ယုံကြည်မှု’ တည် ဆောက်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ NCA သဘောတူ စာချုပ်မှာ ပါဝင် တဲ့အတိုင်း အရပ်သားတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ပြည်သူလူထုရဲ့ စားနပ်ရိက္ခာစုဆောင်းမှု၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုတွေကို မနှောင့်ယှက်ဖို့၊ အပစ်ရပ်နယ်မြေထဲက ပြည်သူတွေရဲ့ လူမှုဘဝ လုံခြုံမှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက် ပေးဖို့”… စတဲ့ အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချ ရမှာဖြစ်သလို တိုင်းရင်းသားတွေ လုံခြုံစွာ လုပ် ကိုင်စားသောက်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီး ပေးရမှာဖြစပါတယ်။ စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေး ထိုးထားရုံသာမကနှလုံးသားထဲကပါ တိုင်းရင်း သားတွေအပေါ် ညီရင်းအစ်ကို၊ မောင်ရင်းနဲ့နှမလို ချစ်ခင်စိတ်နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာနာမှသာ ငြိမ်းချမ်း ရေးရဲ့ အနှစ်သာရပေါ်လွင်မှာပါ။
တိုက်ပွဲတွေနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေ ထိခိုက်ရတာဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပါ နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ တပ်မတော်သား တစ် ယောက် အသက်ဆုံး ရှုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တစ် ယောက် အသက် ဆုံးရှုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံသားတစ် ယောက်ဆုံးရှုံးတာဖြစ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တပ်မတော်သားတွေက ရော၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ ကပါ လိုလားမှာပါပဲ။
စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆီ ဦးတည်ချင်ရင် အကျိုးစီးပွားပေါ် မူတည်စဉ်းစားတာကို ပြန် သုံးသပ် ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ အကျိုးစီးပွားထက် တိုင်းရင်းသား အားလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို လိုလား ရပါမယ်။ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်း အတွက် အကျိုးစီးပွားကို မစွန့်လွှတ်နိုင် ဘူးဆိုရင် ပဋိပက္ခတွေလည်း ဆက်ပြီးဖြစ် ပေါ်နေဦးမှာပါပဲ။ ပြည်သူတွေ အတွက်၊ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်လို့ အားလုံးက ပြောနေကြ ပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ပြည်သူတွေ၊ တိုင်း ရင်းသားတွေ ကပဲ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ခံစားနေရတာပါ။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ရှင်သန်ခွင့်ကို ကာကွယ်ပေးဖို့လိုပြီး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို အထူးရှောင်ရှား ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ချင်းလူမျိုးတွေဟာ AA နဲ့ တပ်မတော်ကြားက တိုက်ပွဲတွေကြားမှာ ကြားညပ် နေရတဲ့ အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား တဲ့ဒေသတွေမှာ အသိဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ် လူ့အခွင့်အရေး စံချိန်စံညွှန်းတွေကို လိုက်နာတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိမှသာ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလည်း ‘ကျွဲကူးရေပါ’ ဖြစ်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်နေတာ တွေက တိုက်ပွဲတွေပဲ မဟုတ်ပါဘူး …. တိုင်းရင်းသား တွေနှစ်သက်လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ အပြုအမူနဲ့ လုပ်ရပ် တွေကို အစိုးရဘက်က လုပ်ဆောင်နေတာတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ (၂၀၁၇) ခုနှစ် မတ်လထဲမှာ မွန်၊ ကရင် နဲ့ ပအို့ဝ်တိုင်းရင်းသားသောင်းချီပြီး မွန်ပြည်နယ် ချောင်းဆုံနဲ့ မော်လမြိုင်ကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ တံတား ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတားလို့ အမည်ပေးမယ့် ကိစ္စကို ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကန့်ကွက်သူတွေက ဒီလိုအမည်ပေးမှာက ဖက်ဒရယ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေတယ်လို့ ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရ ဘက်က ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စကားကို နား မထောင်ဘဲ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတားလို့” အမည် ပေးခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် ကန့်ကွက်မှုတစ်ခုကတော့ ကယား ပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မြင်းစီးရုပ်တု စိုက်ထူမှာကို ကရင်နီလူငယ်တွေဘက် က ကန့်ကွက်ခဲ့ခြင်းပါပဲ။ (၂၀၁၉) ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ (၁၉)ရက်နေ့က ဆန္ဒပြသူတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ရာဘာ ကျည်ဆံတွေ အသုံးပြုနှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက် ခဲ့ပါတယ်။ ကရင်နီလူငယ်တွေဘက်က ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းရုပ်ထုထက် ပင်လုံကတိကဝတ်ဖော်ဆောင်ပေး မှုနဲ့ တန်းတူရည်တူရှိမှုကိုပဲ လိုလားတာပါ။ ပြည်ထောင်စုနေ့မှာမှ ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့အတွက် ပိုပြီးမေးခွန်း ထုတ်စရာဖြစ်လာရပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်ထားရှိမှာကို ကန့် ကွက်မှုတွေမှာ သူ့ကိုမလေးစားလို့မဟုတ်ဘဲ ‘ဗမာ ကြီးစိုးမှု’ ဖြစ်မှုကို မကြိုက်တာကြောင့်လို့ ထောက်ပြ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ ယုံကြည်မှု ခိုင်မြဲစေဖို့ အစိုးရဘက်က အထူး သတိထားချဉ်းကပ်သင့်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ ပြည် နယ်တွေထဲမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးတဲ့ ပြည်နယ်တွေ အတွက် အခြေခံအဆောက်အဦတွေ ကောင်းမွန်လာ ရေး၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍတွေမှာ တိုးတက်လာ ရေးတို့ကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ ဒေသခံတွေ လက်မခံတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တု တွေကို စိုက်ထူတာက နားလည်မှု ပိုဝေးကွာစေနိုင် လို့ မလုပ်ဆောင်သင့်ပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် (Peace Process)ကို ဖော်ဆောင်ရာမှာ မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒကို အလေးဂရုပြု စဉ်းစားဖို့ အထူး လိုအပ်လို့ပါပဲ။ ပြည်မကသူတွေ အေးချမ်းစွာ နေထိုင် နိုင်ချိန်မှာ တောင်တန်းဒေသက လူတွေ နေရပ်စွန့် ခွာထွက်ပြေးရတာ၊ လျှပ်စစ်မီးမရသေးတာဟာ တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးမဟုတ်တာ သေချာပါ တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တကယ်လိုလာရင်း တိုင်းရင်း သားတွေရဲ့ အကျိုးကို တကယ်လိုလားပြီး တန်းတူရည် တူ အခွင့်အရေးကို ဖော်ဆောင်ပေးရမှာပါ။
စိတ်ရင်းစေတနာလည်း ရှိမယ်၊ တိုင်းရင်းသား တွေခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာနာ မယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလည်း အောင် မြင်မှုရလာပြီး တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြား ‘ယုံကြည်မှု’ ရလာမှာပါ။ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်လာတာနဲ့အမျှ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်မှု အလားအလာကို ပိုမို ကောင်းမွန်လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆီ ဦးတည်နိုင် မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ပဋိပက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းပြီး တန်းတူရည် တူရှိမှုကို လိုလားရင် စိတ်ရင်းစေတနာအမှန်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ ကြိုးစားသွားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
နိုငျငံတဈနိုငျငံဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုမှာ အခွခေံ အကဆြုံးအခကျြက ငွိမျးခမျြးရေးပဲဖွဈပါတယျ။ ငွိမျးခမျြးရေးရမှသာ တိုငျးရငျးသားတှေ ရသငျ့ရ ထိုကျတဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ ရရှိမှာဖွဈသလို ပညာ ရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ အလုပျအကိုငျအခှငျ့ အလမျး တှပေါ မွငျ့မားလာမှာဖွဈပါတယျ။ အရပျသား အစိုးရလကျထကျမှာ ငွိမျးခမျြးရေး ဖျောဆောငျနိုငျရေးအတှကျ ကွိုး စားနပေမေယျ့ ထငျသလောကျ ခရီးမပေါကျခဲ့ပါဘူး။
ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေး နှေးပှဲတှေ ကငျြးပရာမှာ လညျး အားလုံးပါဝငျ နိုငျတဲ့ ဆှေးနှေး ပှဲဖွဈဖို့လိုပါတယျ။ NCA စာခြုပျမှာ လကျမှတျရေးထိုး ထားတဲ့အဖှဲ့တှေ နဲ့ သာမက လကျ မှတျ မရေးထိုးရ သေးတဲ့ အဖှဲ့တှနေဲ့ ပါ ဆှေးနှေးတာ ပိုကောငျးပါတယျ။ မွပွေငျ အနအေထားမှာ NCA လကျမှတျရေးထိုးထားတဲ့ တခြို့အဖှဲ့တှနေဲ့ တပျမ တျောကွား စဈရေးတငျး မာမှုတှပေါရှိနလေို့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး အဖွရှော တာက တငျးမာမှုတှကေို ပွလြေော့စမှောပါ။
လကျရှိအခွအေနမှော ရခိုငျပွညျနယျမှာ ဖွဈပှားနတေဲ့ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ နရေပျစှနျ့ ခှာထှကျပွေးရသူ တဈသိနျး ခွောကျသောငျးကြျော ထိ ရှိနပေါပွီ။ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျ မှာလညျး တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ နရေပျ စှနျ့ခှာထှကျပွေးရသူ နှဈသောငျး ကြျောထိရှိပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကခငျြပွညျနယျ၊ ရှမျးပွညျနယျ တို့ မှာလညျး IDP စခနျး တှမှော နထေိုငျနရေသူ တဈ သိနျးကြျောထိရှိနပွေီး မွမွေုပျမိုငျး တှကေို လညျး ရှငျးလငျးနိုငျ သေးခွငျး မရှိသေး ပါဘူး။ အရေးကွီး တာက ငွိမျးခမျြး ရေး ဖျောဆောငျဖို့ အတှကျ “နိုငျငံရေး ပွဿနာကို နိုငျငံရေး နညျးနဲ့ ဖွရှေငျးဖို့ပါပဲ”။
အရပျသားအစိုးရလကျထကျမှာ ဒျေါအောငျ ဆနျးစုကွညျ ကိုယျတိုငျ ဦးဆောငျပွီး “၂၁ ရာစု ပငျလုံညီလာခံ”ကငျြးပခဲ့လို့ တိုငျးရငျးသားတှေ ဘကျက မြှျောလငျ့ခကျြကွီးခဲ့တာအမှနျပါ။ သူမ ကိုယျတိုငျလညျး ငွိမျးခမျြးရေးမရခွငျးရဲ့ ဒုက်ခကို အခြိနျနဲ့အမြှ ပွညျသူတှကေ ခံစားနရေတယျလို့ အသိအမှတျပွုပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ပငျလုံညီလာခံ အတှကျ အရေးပါတဲ့ အမြိုး သားအဆငျ့ နိုငျငံရေး ဆှေးနှေးပှဲတှကေို တခြို့ပွညျ နယျတှမှော ကငျြးပ နိုငျခဲ့ခွငျး မရှိပါဘူး။
အစောပိုငျးက အစိုးရဘကျက ၆ လ တဈကွိမျ ငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံကငျြးပသှားဖို့ စီစဉျထားပမေဲ့ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့၊ ခှဲမထှကျ ရေးစတဲ့ကိစ်စတှမှော သဘောတူညီမှု မရခဲ့ဘဲ ကွနျ့ကွာခဲ့ရတာတှရှေိပါတယျ။ (၂၁)ရာစု ပငျလုံညီလာခံ ပထမအစညျးအဝေးကို (၂၀၁၆) ခုနှဈ စကျတငျဘာလက ကငျြးပခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ နှဈကွိမျထပျမံကငျြးပနိုငျ ခဲ့ပွီး စတုတ်ထအကွိမျ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေး ညီလာခံကိုတော့လာမယျ့ ဩဂုတျလ ဒုတိယ အပတျမှာ ကငျြးပမယျလို့ သိရပါတယျ။
NCA စာခြုပျမှာ လကျမှတျရေးထိုးထားတဲ့ အဖှဲ့ တှသောမက လကျမှတျမရေးထိုးရသေး သူတှကေိုပါ ဖိတျချေါသငျ့တယျလို့ ယူဆ သူတှလေညျးရှိပါတယျ။ အရေးကွီး တာက အစိုးရ၊ တပျမတျောနဲ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှကွေား ‘ယုံကွညျမှု’ တညျ ဆောကျနိုငျဖို့ပါပဲ။ နောကျထပျအရေးကွီးတဲ့ အခကျြတဈခကျြကတော့ NCA သဘောတူ စာခြုပျမှာ ပါဝငျ တဲ့အတိုငျး အရပျသားတှကေို အကာအကှယျပေးဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
“ပွညျသူလူထုရဲ့ စားနပျရိက်ခာစုဆောငျးမှု၊ ကူးသနျးရောငျးဝယျမှုတှကေို မနှောငျ့ယှကျဖို့၊ အပဈရပျနယျမွထေဲက ပွညျသူတှရေဲ့ လူမှုဘဝ လုံခွုံမှုနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ဆောငျရှကျ ပေးဖို့”… စတဲ့ အခကျြတှပေါဝငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စဈရေးတငျးမာမှုတှကေို တတျနိုငျသမြှ လြှော့ခြ ရမှာဖွဈသလို တိုငျးရငျးသားတှေ လုံခွုံစှာ လုပျ ကိုငျစားသောကျနိုငျဖို့ အခှငျ့အလမျးတှေ ဖနျတီး ပေးရမှာဖွစပါတယျ။ စာခြုပျမှာ လကျမှတျရေး ထိုးထားရုံသာမကနှလုံးသားထဲကပါ တိုငျးရငျး သားတှအေပျေါ ညီရငျးအဈကို၊ မောငျရငျးနဲ့နှမလို ခဈြခငျစိတျနဲ့ ကိုယျခငျြးစာနာမှသာ ငွိမျးခမျြး ရေးရဲ့ အနှဈသာရပျေါလှငျမှာပါ။
တိုကျပှဲတှနေဲ့ မသကျဆိုငျတဲ့ တိုငျးရငျးသား တှေ ထိခိုကျရတာဟာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုကိုပါ နှောငျ့နှေးစပေါတယျ။ တပျမတျောသား တဈ ယောကျ အသကျဆုံး ရှုံးတာပဲဖွဈဖွဈ၊ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ တဈ ယောကျ အသကျ ဆုံးရှုံးတာပဲဖွဈဖွဈ၊ နိုငျငံသားတဈ ယောကျဆုံးရှုံးတာဖွဈလို့ ငွိမျးခမျြးရေးကို တပျမတျောသားတှကေ ရော၊ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှေ ကပါ လိုလားမှာပါပဲ။
စဈမှနျတဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးဆီ ဦးတညျခငျြရငျ အကြိုးစီးပှားပျေါ မူတညျစဉျးစားတာကို ပွနျ သုံးသပျ ဖို့ လိုပါတယျ။ ကိုယျ့အဖှဲ့အစညျး ရဲ့ အကြိုးစီးပှားထကျ တိုငျးရငျးသား အားလုံးရဲ့ အကြိုးစီးပှားကို လိုလား ရပါမယျ။ ကိုယျ့အဖှဲ့အစညျးတဈခုတညျး အတှကျ အကြိုးစီးပှားကို မစှနျ့လှတျနိုငျ ဘူးဆိုရငျ ပဋိပက်ခတှလေညျး ဆကျပွီးဖွဈ ပျေါနဦေးမှာပါပဲ။ ပွညျသူတှေ အတှကျ၊ တိုငျးရငျးသားတှအေတှကျလို့ အားလုံးက ပွောနကွေ ပမေယျ့ လကျတှမှေ့ာ ပွညျသူတှေ၊ တိုငျး ရငျးသားတှေ ကပဲ ဆငျးရဲဒုက်ခတှေ ခံစားနရေတာပါ။
တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးတှေ အပါအဝငျ သကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးတှအေနနေဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ ရှငျသနျခှငျ့ကို ကာကှယျပေးဖို့လိုပွီး လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုတှကေို အထူးရှောငျရှား ဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ခငျြးလူမြိုးတှဟော AA နဲ့ တပျမတျောကွားက တိုကျပှဲတှကွေားမှာ ကွားညပျ နရေတဲ့ အနအေထားဖွဈနပေါတယျ။ တိုကျပှဲဖွဈပှား တဲ့ဒသေတှမှော အသိဘကျကပဲဖွဈဖွဈ လူ့အခှငျ့အရေး စံခြိနျစံညှနျးတှကေို လိုကျနာတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ငွိမျးခမျြးရေးရရှိမှသာ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုလညျး ‘ကြှဲကူးရပေါ’ ဖွဈပျေါလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
ငွိမျးခမျြးရအေတှကျ အဟနျ့အတားဖွဈနတော တှကေ တိုကျပှဲတှပေဲ မဟုတျပါဘူး …. တိုငျးရငျးသား တှနှေဈသကျလကျခံနိုငျခွငျးမရှိတဲ့ အပွုအမူနဲ့ လုပျရပျ တှကေို အစိုးရဘကျက လုပျဆောငျနတောတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။ (၂၀၁၇) ခုနှဈ မတျလထဲမှာ မှနျ၊ ကရငျ နဲ့ ပအို့ဝျတိုငျးရငျးသားသောငျးခြီပွီး မှနျပွညျနယျ ခြောငျးဆုံနဲ့ မျောလမွိုငျကို ဆကျသှယျထားတဲ့ တံတား ကို ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးတံတားလို့ အမညျပေးမယျ့ ကိစ်စကို ကနျ့ကှကျခဲ့ကွပါတယျ။ ကနျ့ကှကျသူတှကေ ဒီလိုအမညျပေးမှာက ဖကျဒရယျနဲ့ဆနျ့ကငျြဘကျ ဖွဈနတေယျလို့ ဝဖေနျခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အစိုးရ ဘကျက ဒသေခံတိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ စကားကို နား မထောငျဘဲ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးတံတားလို့” အမညျ ပေးခဲ့ပါတယျ။
နောကျထပျ ကနျ့ကှကျမှုတဈခုကတော့ ကယား ပွညျနယျ လှိုငျကျောမွို့နယျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး မွငျးစီးရုပျတု စိုကျထူမှာကို ကရငျနီလူငယျတှဘေကျ က ကနျ့ကှကျခဲ့ခွငျးပါပဲ။ (၂၀၁၉) ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီ (၁၉)ရကျနကေ့ ဆန်ဒပွသူတှကေို ရဲတပျဖှဲ့က ရာဘာ ကညျြဆံတှေ အသုံးပွုနှိမျနငျးခဲ့တဲ့ ဖွဈစဉျပျေါပေါကျ ခဲ့ပါတယျ။ ကရငျနီလူငယျတှဘေကျက ဗိုလျခြုပျအောငျ ဆနျးရုပျထုထကျ ပငျလုံကတိကဝတျဖျောဆောငျပေး မှုနဲ့ တနျးတူရညျတူရှိမှုကိုပဲ လိုလားတာပါ။ ပွညျထောငျစုနမှေ့ာမှ ဖွိုခှငျးခဲ့တဲ့အတှကျ ပိုပွီးမေးခှနျး ထုတျစရာဖွဈလာရပါတယျ။
ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးကွေးရုပျထားရှိမှာကို ကနျ့ ကှကျမှုတှမှော သူ့ကိုမလေးစားလို့မဟုတျဘဲ ‘ဗမာ ကွီးစိုးမှု’ ဖွဈမှုကို မကွိုကျတာကွောငျ့လို့ ထောကျပွ သူတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ တိုငျးရငျးသား တှနေဲ့ ယုံကွညျမှု ခိုငျမွဲစဖေို့ အစိုးရဘကျက အထူး သတိထားခဉျြးကပျသငျ့ကွောငျး တှရေ့ပါတယျ။ ပွညျ နယျတှထေဲမှာ ဖှံ့ဖွိုးမှုနညျးပါးတဲ့ ပွညျနယျတှေ အတှကျ အခွခေံအဆောကျအဦတှေ ကောငျးမှနျလာ ရေး၊ စိုကျပြိုးမှေးမွူရေးကဏ်ဍတှမှော တိုးတကျလာ ရေးတို့ကို ဦးစားပေးလုပျဆောငျသငျ့ပါတယျ။ အဲဒီလို မဟုတျဘဲ ဒသေခံတှေ လကျမခံတဲ့ ဗိုလျခြုပျရုပျတု တှကေို စိုကျထူတာက နားလညျမှု ပိုဝေးကှာစနေိုငျ လို့ မလုပျဆောငျသငျ့ပါဘူး။
ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ (Peace Process)ကို ဖျောဆောငျရာမှာ မွနျမာ နိုငျငံအတှငျး မှီတငျးနထေိုငျကွတဲ့ တိုငျးရငျးသားလူမြိုး အားလုံးရဲ့ ဆန်ဒကို အလေးဂရုပွု စဉျးစားဖို့ အထူး လိုအပျလို့ပါပဲ။ ပွညျမကသူတှေ အေးခမျြးစှာ နထေိုငျ နိုငျခြိနျမှာ တောငျတနျးဒသေက လူတှေ နရေပျစှနျ့ ခှာထှကျပွေးရတာ၊ လြှပျစဈမီးမရသေးတာဟာ တနျးတူရညျတူ အခှငျ့အရေးမဟုတျတာ သခြောပါ တယျ။ ငွိမျးခမျြးရေးကို တကယျလိုလာရငျး တိုငျးရငျး သားတှရေဲ့ အကြိုးကို တကယျလိုလားပွီး တနျးတူရညျ တူ အခှငျ့အရေးကို ဖျောဆောငျပေးရမှာပါ။
စိတျရငျးစတေနာလညျး ရှိမယျ၊ တိုငျးရငျးသား တှခေံစားနရေတဲ့ ဒုက်ခတှကေိုလညျး ကိုယျခငျြးစာနာ မယျဆိုရငျ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲတှလေညျး အောငျ မွငျမှုရလာပွီး တဈဖကျနဲ့တဈဖကျကွား ‘ယုံကွညျမှု’ ရလာမှာပါ။ ယုံကွညျမှုတညျဆောကျလာတာနဲ့အမြှ ငွိမျးခမျြးရေးဖျောဆောငျနိုငျမှု အလားအလာကို ပိုမို ကောငျးမှနျလာပွီး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုဆီ ဦးတညျနိုငျ မှာပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ ပဋိပက်ခတှခြေုပျငွိမျးပွီး တနျးတူရညျ တူရှိမှုကို လိုလားရငျ စိတျရငျးစတေနာအမှနျနဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးရရှိဖို့ ကွိုးစားသှားသငျ့ပွီဖွဈပါတယျ။